तिहारमा कस्तो मिठाइ खाने? यी हुन् मिठाइमा प्रयोग हुने हानिकार रसायन
मिठाइमा प्रयोग हुने हानिकार रसायन
देख्दा खेरी जिब्रो नै रसाउने मिठाइमा र अन्य गुलिया परिकारमा न्यून गुणस्तर र मिसावट धेरै हुुने गर्छ । मिठाईमा प्रयोग हुने हानिकारक रसायन यस प्रकार छन्ः
फर्मालिनः मिठाईलाई लामो समयसम्म ताजा राख्न वा बिग्रनबाट जोगाउन मिठाइ कम्पनीहरुले फर्मालिन नाम गरेको रसायन प्रयोग गर्छन्। यो रसायन विशेषगरी लाशलाई गन्हाउनबाट जोगाउन शव गृहमा प्रयोग गरिन्छ । फर्मालिन मिसिएको परिकारले किड्नी र कलेजोलाई हानी गर्छ । यसले दम र क्यान्सर पनि निम्त्याउँछ। गर्भवती महिलाहरुका लागि यो रसायन झनै खतरनाक मानिन्छ । यस्तो रसायन मिसिएको खानेकुरा खाँदा अपांग बच्चा जन्मिने सम्भावना हुन्छ।
सिल्भर र आल्मुनियमः तिहारमा खाईने बर्फी लगायत केही मिठाई सिल्भर लगायतका धातु मिसाइएका कागजले ढाकेर बनाइएको हुन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकार मानिन्छ । मिठाई ढाक्न प्रयोग हुने सिल्भरको कागजमा अल्मुनियम पनि मिसाइन्छ । अल्मुनियमले दिमागका कोष र तन्तुलाई असर गर्छ । गर्भवती महिलालाई झन् अशर गर्छ । तसर्थ सिल्भरको कागजले ढाकेको मिठाई खानुअघि औंलाले बिस्तारै घोट्नुपर्छ । यदि सो कागज हानिकार नभए तत्कालै हराउँछ ।
गुडमा बनाएको मिठाई नै किन खाने ?
बढ्दो अस्वस्थ प्रतिष्प्रर्धासँगै आजभोली कृत्रिम गुलियो पदार्थबाट मिठाई बनाउने संस्कार बढ्दो छ । चिनि पनि परिस्किृत गरिने भएकाले विज्ञहरुले यसको सट्टा गुढ, मह र मिसावट नगरिएको खुदोबाट घरमै परिकार बनाउन सल्लाह दिन्छन् । मिसावटरहित गुडबाट बनाएका परिकार गुलियो भए पनि स्वास्थ्यलाई निम्न फाईदा गर्छः
–गुड चिनि जस्तो परिमार्जित नहुने भएको यसमा प्रशस्त आइरन हुन्छ जुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
–गडले शरिरभित्रको अपवित्र वा दुःषित रगतलाई सफा गरिदिन्छ, जबकी ह्वाईट सुगरले यस्तो कुनै काम गर्दैन ।
–गुड मिसाएको मिठाइले शरिरमा ब्लड ग्लुकोजको मात्रा बढाउँदैन, जबकी चिनिले झन् बढाउँछ ।